I-Indiya -Uhambo lwe-Absolut | Uhambo lwe-Absolut (Iphepha 2)
Imbali yeGastronomy yaseIndiya
Imbali ye-gastronomy yase-India inemvelaphi yesiko egcinwe kumasiko amaninzi abemi bayo.
Iibhanki eziphezulu eIndiya
Inkqubo yezemali yaseIndiya ineeyantlukwano ezininzi xa kuthelekiswa naleyo yamazwe aseNtshona. Umsebenzi…
Le midaniso asi-8 yehlabathi ayikumemeli nje kuphela ukuba udanise, kodwa nokuba uqonde ngcono ngakumbi iimpembelelo kunye nenkcubeko yeekona ezahlukeneyo zomhlaba.
Izimangaliso ezisixhenxe zeli hlabathi lanamhlanje zisibhaptiza kwilifa eligcwele yimbali kunye neemfihlo ezivela e-China ukuya kwiindawo eziphakamileyo zePeru.
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu kwihlabathi
Ukusuka eJapan ukuya eGranada, sizicwilisa kwezona zikhumbuzo zibalulekileyo zehlabathi ukukhuthaza ukuba uqalise uhambo lokugqibela.
I-Indiya kwiminyaka ephakathi
Ibinjani i-India kumaXesha Aphakathi? Ubukhosi bakwaGupta kangangeenkulungwane ezimbini babumbanisa yonke i-India ukongeza ekufumaneni i-apogee enkulu. Ngaba uyafuna ukudibana naye?
Iimpahla zamadoda amaHindu
Ukudityaniswa kwesinxibo esiqhelekileyo samaHindu, iimpahla kunye nesinxibo samadoda. Ukusuka kwi-Khalat yemveli, ukuya kwi-Churidar ye-India yangoku
I-Fort Kochi: Ukutshona kwelanga, iziqholo, kunye neColonial Charm eMzantsi India
Kwiphondo laseIndiya elisemazantsi eKerala, kukho izibuko elidala lobukoloniyali elibizwa ngokuba yiFort Kochi lizele ziziqholo, ukungaziphathi kakuhle nokuthandeka.
Ukuhamba ngololiwe eIndiya
Ukuhamba ngololiwe e-India ngamava afuna iingcebiso ezithile, amehlo avulekileyo kodwa, ngaphezulu kwako konke, amandla okuziyeka uhambe.
Sikuxelela ngazo zonke izithethe namasiko eIndiya, ilizwe elahlukileyo elimela iinkolo zalo, i-gastronomy kunye ne-curiosities
Iingcebiso ezili-15 zokuya eIndiya
Ukusuka kwelona xesha lokuhamba ukuya kwimibuliso yesiqhelo, ezi ngcebiso zili-15 zokuya eIndiya ziya kukunceda ucwangcise amava akho.
Ezi ndawo zili-15 zinemibala emhlabeni ziguqula amava okuhamba abe ngumnyama wobunewunewu, inkcubeko kunye nokudibana.
Ukutshona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni
Ezona ndawo zintle zokutshona kwelanga emhlabeni zisikhumbuza ngemfuneko yokuhamba nokuba nezinto ezicingisisayo.
Ndwendwela iilwandle zaseGoa, eIndiya
Kwindawo ethile kunxweme olusentshona yeIndiya, iilwandle zaseGoa ziyaqhubeka ukukhuthaza iimpembelelo zesiPhuthukezi, ukungaqheleki kunye nomtsalane wehippie.
Iingcebiso ezili-9 zokunxibelelana nabantu bendawo xa useluhambeni
Ezi ngcebiso zili-9 zokunxibelelana nabantu bendawo xa useluhambeni ziya kukuvumela ukuba uziqhelanise naloo ndawo intsha kuyo yonke imiba.
Ukutyelela iTaj Mahal eIndiya
I-Taj Mahal, ilitye lesikhumbuzo laseIndiya, lakhiwa ngu-Emperor Shah Jahan ukuhlonipha umfazi wakhe ongasekhoyo, u-Mumtaz Mahal, ngo-1632.
Izinto ezili-10 ekufuneka uzazi ngaphambi kokuya eIndiya
Ezi zinto zili-10 kufuneka wazi ngaphambi kokuya e-India ziya kuba luncedo kakhulu kwilizwe le-curry, iTaj Mahal kunye neenkomo ezingcwele.
I-Great Wall okanye iGrand Canyon zimbini kwezi ndawo zili-10 zilandelayo emhlabeni omele uzibone ngaphambi kokuba usweleke.
Ngaba uyazi ukuba i-chess yaqanjwa eIndiya? Kule nqaku sichaza ezona zinto zibalulekileyo zaseIndiya, kwaye ngaphezulu kwesinye siyakumangalisa
Elona galelo likhulu laseIndiya kwihlabathi: imathematics, isayensi, iilwimi kunye noyilo. Sikuxelela ukuba kutheni.
Ukusela amanzi asebhotileni, ukuqesha ukudlulisa okanye ukuziyeka ezinye zezi ngcebiso zilandelayo zosuku lokuqala kwindawo entsha.
Iindawo ezifanelekileyo kwihlabathi kwiindawo zokuziqhelanisa ne-ecotourism
Ukuhamba usiya kutyelelo lwe-ecotourism eBorneo, eAmazon okanye eIndiya iba yeyona ndlela iyiyo yokuhlonipha iyantlukwano kunye neenkcubeko ezahlukeneyo zehlabathi.
Konke malunga neminqweno yenkcubeko yamaIndiya kunye neyona nto inomdla malunga nenkcubeko yaseIndiya, uluntu olukhethekileyo oluya kukumangalisa.
I-10 elimangalisayo leLifa leMveli elingabonakaliyo
Ezi zi-10 ze-Unesco ezingabonakaliyo zeHeritages ezivela kwimibala yaseMexico ukuya kwi-yoga nge-Fallas yaseValencia.
Intyatyambo yeLotus, ivumba eliqhelekileyo nelesizwe laseIndiya
Intyatyambo yelotus yintyatyambo yelizwe laseIndiya. Ikwaziwa njengeLotus eNgcwele, iLotus, iLotus yaseAsia, ...
IKheer, eyona dessert ibalaseleyo eIndiya
IKheer, ekwabizwa ngokuba yiPayasam okanye iPayesh, siswiti esiqhelekileyo saseIndiya esilungiselelwe nerayisi ...
Isari kunye nedhoti, iingubo ezimbini zakudala eIndiya
I-sari kunye ne-dhoti zizambatho ezibini ezisetyenziswa kakhulu ngabafazi kunye nabesilisa kweli lizwe
Intsika eNqabileyo yentsimbi yaseDelhi
Intsika yentsimbi yaseDelhi sisikhumbuzo esikwiQutb Complex, embindini weQuwwatul Mosque kwisixeko saseNew Delhi
Imijelo yoMlambo iGanges
Namhlanje sizokwazi ezinye zezona zinto zibaluleke kakhulu kuMlambo iGanges. Masiqale ngokukhankanya uMlambo iAlaknanda, umlambo kwiiHimalaya ...
Imiba emibi yeNkqubo yezeMfundo eIndiya
Namhlanje siza kuthi kutheni le nto inkqubo yemfundo yaseIndiya ingeyona igqwesileyo. Inqaku lokuqala lokuba ...
Izixhobo ezisetyenziswa ngabafazi baseIndiya
Namhlanje siza kudibana nezinto eziqhelekileyo zabasetyhini baseIndiya. Masiqale ngokukhankanya i ...
Zithini izizathu ezibangela ukufa eIndiya?
Ngelixa kuyinyani ukuba izizathu ezi-5 eziphambili zokufa eIndiya sisifo sentliziyo, i ...
Oonobangela abaphambili bokufa eIndiya
Ngalo mcimbi siza kukubonisa eyona nto ibangela ukusweleka e-India: Izifo zeCoronary ziyaziwa ...
Umahluko phakathi kweIndiya neNtshona
Ngeli xesha siza kukubonisa umohluko phakathi kweIndiya nenkcubeko yaseNtshona. Masiqale ngokuthetha ngoqhawulo mtshato. Kala ...
Abazobi abaGqwesileyo baseIndiya
Ngesi sihlandlo siya kwazi ukuba ngoobani abazobi abadumileyo e-India. Masiqale ngokukhankanya Abanindranath Tagore, ethathwa njenge ...
Izibhedlele ezinkulu eIndiya
Ngeli xesha siza kwazi izibhedlele eziphambili zaseIndiya. Masiqale ngokukhankanya ityala likaSir Ganga Ram ...
Abapheki abadumileyo baseIndiya
Namhlanje siza kudibana nabapheki abadumileyo baseIndiya. Masiqale ngokukhankanya uVikas Khanna, umpheki owazalelwa e ...
Ngoobani awona maIndiya aHome?
Ngeli xesha siza kufumanisa ukuba ngoobani owona maIndiya mahle. Ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka siqale ngokukhankanya uSalman Khan, ...
Imbali ye-Indiya yakudala: Abantu baPhambili, ii-Aryans kunye neBrahmanism
I-Indiya yisingasiqithi olubanzi we-Asiya, ingingqi enkulu ukusukela kumaxesha akudala yayiyindawo yempucuko eqaqambileyo….
Izikhumbuzo zeMbali zaseIndiya
Namhlanje siza kutyelela izikhumbuzo zembali ezibalulekileyo eIndiya. Masiqale ngokwalatha imeko yeTaj ...
Igalelo elibalulekileyo elivela eIndiya
Makhe sifunde ngamanye amagalelo abaluleke kakhulu asinikwe yi-India. Masiqale ngokukhankanya isihloko semathematika. Indiya ...
AmaNdiya Abalweli beNkululeko
Ngeli xesha sizakudibana nabasetyhini abalwela inkululeko ababalulekileyo e-India. Masiqale ngokukhankanya uRani ...
Ngeli xesha siza kudibana nezona zizwe zibalulekileyo zaseIndiya. Masiqale ngokukhankanya iiBodos, ubuhlanga ...
Iimfazwe neeMfazwe zaseIndiya
Namhlanje siza kufunda malunga neemfazwe ezibalulekileyo kunye neemfazwe zaseIndiya. Masiqale ngokukhomba kwiDabi lasePlassey ...
Iimfazwe zaseIndiya yakudala
Ngeli xesha siza kwazi ezinye zeemfazwe kunye neemfazwe zaseIndiya yaMandulo. Masiqale ngokukhankanya ...
Ngawaphi amazwe amatsha eIndiya?
Ngeli xesha siza kwazi ukuba zeziphi ezona ndawo zamva nje zaseIndiya. Masiqale ngokukhankanya iChhattisgarh, urhulumente ...
Amazwe anabantu abaninzi eIndiya
Namhlanje siza kwazi ukuba ngawaphi amazwe anabantu abaninzi eIndiya. Masiqale ngokukhankanya iBihar, ...
Uncwadi lwaseIndiya lolunye lwezona zibalulekileyo nezindala ehlabathini. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uncwadi lwaseIndiya ...
Zenkokheli Zembali zaseIndiya
Namhlanje siza kudibana neenkokheli zembali zaseIndiya, ezaziwayo nezithandwayo kungekuphela ...
Zeziphi ezona ndawo zithengwa kakhulu kwi-Intanethi eIndiya?
Ngeli xesha siza kwazi ukuba zeziphi ezona ndawo zithengwa kakhulu kwi-Intanethi eIndiya. Masiqale ngokukhankanya ...
Ezona mveliso zithunyelwa ngaphandle eIndiya
Namhlanje siza kwazi ukuba zeziphi ezona mveliso zisisiseko zithunyelwa ngaphandle eIndiya. Masiqale ngokukhankanya amafutha ezimbiwa, ...
Iinkqubo zeTV ezaziwa kakhulu eIndiya
Ngeli xesha siza kubonisa ezona nkqubo zithandwayo zikamabonwakude kunye nomdlalo kumabonakude waseIndiya. Masiqale ngokukhankanya ...
Imiboniso bhanyabhanya ephezulu kakhulu
I-Bollywood yenye yezona mveliso zinamandla kwi-cinema. Rhoqo ngonyaka amakhulu eemveliso zemiboniso bhanyabhanya ayenziwa ...
Zeziphi ezona zithuthuthu zithengisa eIndiya?
Kuyaziwa ukuba enye yeendlela zothutho eIndiya zizithuthuthu, yiyo loo nto…
Ezona zixeko zingcolisekileyo zaseIndiya
Siyazi kakuhle ukuba i-India sisizwe esinezinga eliphezulu lokungcoliseka kwendalo, umoya namanzi….
Ungcoliseko emhlabeni lubangelwa kuthotho lwezizathu ezinje ngokugawulwa kwamahlathi eAmazon, ...
Iindawo eziBalulekileyo zobuHindu eIndiya
Namhlanje siza kudibana neyona ndawo ibalulekileyo yobuHindu eIndiya. Masiqale ukhenketho e ...
Iindawo ezingcwele zobuHindu eIndiya
Namhlanje siza kundwendwela ezona ndawo zingcwele zobuHindu eIndiya. Masiqale ukhenketho eTempileni ...
I-Indiya lilizwe elinemilambo eyahlukeneyo, yiyo loo nto sinethuba lokuziqhelanisa ...
Ngawaphi amazibuko aphambili eIndiya?
Namhlanje siza kutyelela awona mazibuko abalulekileyo e-India. Masiqale ngokukhankanya iziqithi ...
Iitempile zinikezelwe kuVishnu eIndiya
Namhlanje siza kundwendwela iitempile ezithile eIndiya ezinikezelwe kuthixo uVishnu. Masiqale ukhenketho lwenkolo esixekweni ...
Iziselo Ezidumileyo zaseIndiya
Ngeli xesha siza kuthetha ngeziselo ezithandwayo ezivela eIndiya. Masiqale ngokukhankanya iNimbu Pani, isiselo ...
Abadlali abadumileyo baseIndiya kunye nabadlali baseHollywood
Alithandabuzeki elokuba i-Bollywood ibenzile ubukho bayo kwihlabathi liphela. Uninzi lwabadlali kunye nabadlali ...
Zeziphi ezona bhanyabhanya zomdaniso zibalaseleyo?
Ngeli xesha siza kudibana neyona miboniso bhanyabhanya yomdaniso ibalaseleyo. Masiqale ngokukhankanya iDisco Dancer, a ...
Uthotho lweeMidlalo ze-Bollywood B
I-Bollywood yaziwa ngokwenza impumelelo enkulu kwezorhwebo, nangona kunjalo sikwafumana uthotho lweemovie B. Masazi ukuba yintoni i…
Abalawuli ababalulekileyo beCinema yaseIndiya
Ngeli xesha siza kukwazisa kwabanye babalawuli ababalulekileyo be cinema yaseIndiya. Masiqale ngokukhankanya uGugu ...
Amasiko angaqhelekanga kunye neNkcubeko yaseIndiya
Ngeli xesha siza kwazi ezinye izithethe namasiko angaqhelekanga e-India. Masiqale ngokukhankanya Ukutsha kwabahlolokazi ...
Izithethe zamandulo kunye nezingaqhelekanga zaseIndiya
I-India yindawo echaseneyo, lilizwe elinotyebelo lwangoku, kwaye kwangaxeshanye ...
Zeziphi ezona DJ zibalaseleyo eIndiya?
I-DJ okanye iDiski Jockey ngumntu owenza umculo orekhodiweyo kubaphulaphuli, kwiklabhu, kwimivalo, kwiidisco kunye ...
Ngoobani iimvumi eziphambili eIndiya?
Ngeli xesha siza kudibana neemvumi eziphambili eIndiya. Masiqale ngokukhankanya u-Mohammad Rafi, imvumi ethathelwa ingqalelo ...
Zeziphi izinto oza kuzithenga eIndiya?
I-Indiya yiparadesi yokuthenga. Apha unokufumana iindidi zamanqaku, zihlala zenziwe ngezandla, ...
Ngoobani iimbaleki ezibalaseleyo eIndiya?
Ngeli xesha siza kufumanisa ukuba ngoobani iimbaleki eziphambili eIndiya. Masiqale ngokukhankanya uSachin Tendulkar, odume ...
Kuqinisekisiwe: IiGypsies zivela eIndiya
Oososayensi, ngohlalutyo lwe-DNA ye-13 yabantu base-Roma eYurophu, bakwazi ukuqinisekisa imvelaphi yaseIndiya yamaRomany
Iibhiya ezidumileyo zaseIndiya
Umzi mveliso webhiya waseIndiya uyanda, kwaye utyelelo eIndiya belungazukugqitywa ngaphandle kokuzama ...
Zeziphi ezona zixeko zixineneyo eIndiya?
Alithandabuzeki elokuba iIndiya lelinye lawona mazwe anabantu abaninzi eIndiya. Okulandelayo siya kudibana ...
Iqakamba njengomdlalo wesizwe
Amawakawaka abantu baziqhelanisa nayo yonke imihla, ngokungathandabuzekiyo iqakamba yeyona midlalo ixhaphakileyo eIndiya.
Izilwanyana eIndiya (V): Ibhokhwe
Iinyani ezonwabisayo malunga nokusetyenziswa kweebhokhwe e-India, zichaza ngokufutshane amava omhlobo wam ngexesha lesiko lamaSilamsi apho kuxhelwa khona iibhokhwe ezingama-500.000.
U-Okali: Isiko lase-India lokuphosa abantwana kwi-vacuum
E-India kukho isithethe sakudala nesinqabileyo esibizwa ngokuba yi-okali, apho iintsana ziphoswa kwilize ukusuka kubude obuziimitha ezili-15
Ukuba unomdla kwezopolitiko, awunakuyeka ukufunda eli nqaku lilandelayo malunga norhulumente wase-India. I…
Imbali yezoPolitiko zaseIndiya
Ngeli xesha siza kuthetha ngezopolitiko eIndiya. Masiqale ngokukhankanya ukuba i-India ...
Ngeli xesha siza kuthetha ngendalo eyahlukeneyo yaseIndiya. I-Indiya ingaphakathi kwe-ecozone ...
IJografi kunye neMozulu yaseIndiya
Namhlanje siza kuthetha ngejografi kunye nemozulu yaseIndiya. I-Indiya ine ...
Iintlambo zeLahaul neSpiti eIndiya
Intlambo yaseLahaul kunye neSpiti Valley zezona ndlela zimbini onokukhetha kuzo kuzo zonke iindwendwe ezivela eIndiya ezinomdla wokwazi ngazo
Iitortilla zaseIndiya, isitya esiqhelekileyo saseIndiya
Alithandabuzeki elokuba i-India lilizwe eligcwele amathuba ngeendlela zonke, ngenxa yesi sizathu siza kuthetha ngalo
U-Indira Gandhi, umfazi obalulekileyo kwimbali ye-India
U-Indira Gandhi ngumfazi okwazile ukumakisha imbali yase-India ubukhulu becala kwinani elikhulu lamakhadi kunye neengqondo, njengoko engowesifazane wokuqala
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa usitya eIndiya
Namhlanje siza kuthetha ngemiba enxulumene nokutya kwaseIndiya. Masiqale ngokukhankanya amasiko athile xa usitya. Ngexesha lesidlo sasemini ...
Amaziko okumbiwa kwezinto zakudala eIndiya
Ngenkcubeko yakudala, kuqhelekile ukuba i-India ibenendawo eninzi yezithuba zomtsalane wezinto zakudala ezixabisekileyo ...
E-India siza kuba nakho ukufumana isixa esikhulu seendawo ezibalulekileyo zokhenketho ngokubanzi, ngenxa yesi sizathu siza kuthetha ngezinye zazo
Ukubaluleka kweBengal Tiger eIndiya
E-India siza kufumana inani elikhulu lezinto ezinomtsalane kubakhenkethi ezinomtsalane kubo bonke, apho indalo okanye kunye
Ukutyelela iintaba-mlilo kunokubonakala ngathi yeyona nto ikhethekileyo yokhenketho, kodwa masikhumbule ukuba abantu abaninzi kwihlabathi liphela ...
Iindawo eziKhuselweyo zaseIndiya
Namhlanje siza kwazi iindawo ezithile ezikhuselweyo zaseIndiya. Kolu hlanga sifumana uninzi lweendlela ezizezinye ...
Ukuba lilizwe elikhulu, akukho nzima ukuza kwingcinga yokuba e-India siya ...
Izithixo kunye noothixo baseIndiya (Icandelo 1)
I-India ibingayi kuba njalo ukuba ibingenabo bonke obo buhle beentsomi ezisekwe kuzo ...
Ukufa kukaSai Baba, kunye nokuzalwa kwakhona?
Ekupheleni kweveki yesithathu ka-Epreli ilizwe lavuka lakuva iindaba zokusweleka komoya omkhulu weSri ...
Uhlobo lwemoto yaseIndiya iMahindra
Namhlanje siza kuthetha ngemoto yaseIndiya iMahindra, esebenza kwimakethi yaseIndiya ...
Ukhenketho lweNtaba kwiiHimalaya
Olunye ukhetho olulungileyo lwezokhenketho ngaphakathi kwelizwe laseIndiya kwaye lukwalungele bonke abo bathatha inxaxheba ...
I-India ivelisa zonke iintlobo zeemveliso ezinomdla ukuba ziqwalaselwe, kodwa yenye yezona zinto ziphambili ekufuneka sizithathele ingqalelo xa sityelele
Iimpawu eziphambili zeIndiya
I-India lelinye lawona mazwe mahle esinokuthi siwatyelele, ngakumbi ngenxa yamathuba amakhulu esele sinikezelwe kuwo kulowo nalowo kuwo
Elinye lawona mazwe abaluleke kakhulu e-India ngaphandle kwamathandabuzo yi-West Bengal, indawo eyinkunzi enkulu
Iimvumi ezaziwayo ezivela eIndiya
Kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi kunye nezingqisho ezahlukeneyo, baninzi iimvumi neemvumi abashiye uphawu lwabo, ...
AmaHindu adumileyo kwiindawo ezahlukeneyo
Namhlanje siza kudibana namaHindu adumileyo kumacandelo ahlukeneyo. Masiqale ngehlabathi lobugcisa, ngokuqinisekileyo liyabonakala ...
Zeziphi ezona zilwanyana zibalulekileyo eIndiya?
Ngeli xesha siza kuthetha ngezilwanyana zamaHindu. Masiqale ngehlosi le-Bengal. Le ngwe ibonakala ...
Ngoobani oosozigidi eIndiya?
Ngeli xesha siza kufumanisa ukuba ngoobani oosozigidi eIndiya. Njengoko usazi kakuhle, sihlandlo ngasinye ...
Iikhowudi zeposi zaseIndiya
Amaxesha amaninzi, xa sifuna ukubonelela ngedatha yethu, siyacelwa ukuba songeze i-zip khowudi yethu, into exhaphake kakhulu, kodwa, ine ...
Indiya, ilizwe eligcwele ubutyebi
Ngokuqinisekileyo kubantu esizifumana sihlala kummandla osentshona, umfanekiso oqingqiweyo wasempuma yindlela yokubona
IHonda kunye nezithuthuthu zayo zamaHindu
Enye yeemveliso eziphambili kwimarike, kwintsimi yezithuthuthu, ihlala i-Honda. Le nkampani ukusukela ...
I-Astronomy kwi-Indiya yakudala
Siyazi ukuba ungumthandi wenzululwazi ngeenkwenkwezi, yiyo loo nto ngeli xesha siza kuthetha nge-astronomy yamaHindu….
Ukucheba iinwele: Isiko lamaHindu eliNkulungwane
Ukunyamekelwa kweenwele kuya kuhlala kuyinto ephazamisayo kubantu abaninzi, ngakumbi kwabo bangenayo ...
Izandiso zaseIndiya kunye neeWigs
Izinwele, ngaphandle kwayo yonke into, akukho lula ukuyiphatha, ngaphambi kokuba ube neenwele ezifanelekileyo ...
I-Gastronomy yamaHindu: Izithako kunye nezitya
Olunye lweentlobo zokhenketho olwenziwayo eIndiya ngokungathandabuzekiyo kukhenketho lokutya. Intoni…
Ulwazi kwi-gurus yase-India
Ngeli thuba sithathe isigqibo sokuthetha nge-gurus yase-India, ethathwa njengezidalwa ezinikwe ubabalo lukaThixo ...
Iindawo zeNdalo eIndiya
Ngeli xesha siza kutyelela indawo ezithile zendalo eIndiya. Siza kuqala ngokucebisa ngokundwendwela ummandla waseGanges e ...
I-Homeopathy kunye ne-Osteopathy: Elinye iyeza eIndiya
Namhlanje siza kuthetha ngolunye unyango. Masiqale ngokukhankanya amayeza e-homeopathic. Wakhe weva ...
Imisebenzi yobugcisa yaseIndiya
Ngaba ungumlandeli wobugcisa? Uya kuba nomdla wokwazi ukuba e-India ungathenga uthotho lwezikhumbuzo ...
Iingubo zomtshato eBrazil
Umtshato ngokungathandabuzekiyo ngumzuzu okhethekileyo kubomi babo bonke abantu ababandakanyekayo, kwaye kungenjalo ...
Intengiso yempahla yangaphantsi yamadoda eIndiya
Ukuba uthatha isigqibo sokuthenga ezona mpahla zintle ngumsebenzi onzima ngenxa yokwahluka kwezitayile, uyilo kunye ...
IiSafire ezidumileyo zaseKashmir
Njengoko kusaziwa, zine iindidi zezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo ezinokufunyanwa emhlabeni, ...
Thenga amatye anqabileyo eIndiya
Ubunewunewu obuza kubakho ubucwebe okanye ilitye elixabisekileyo kuya kuhlala kubuthathaka ...
Izipho zemitshato yamaHindu
Imitshato ihlala iyimicimbi emnandi ukubakho nanini na xa kufika isimemo, nokuba sivela kumalungu osapho ...
Ukutya kwe-India yase-Ancestral
Ukuba ufuna ukugcina inani elilungileyo, kuya kufuneka ubhenele kuthotho lokutya okunika izibonelelo ezingaphezulu ...
Iifilimu zothando zamaHindu
I-cinema kuyo yonke imbali yayo isinike inani elingenasiphelo lezinto zakudala eziza kukhunjulwa ...
IHenna: Idayi yemifuno yamaHindu yokufaka imibala kwizinwele
Kwixesha elidlulileyo besithetha ngeHenna, idayi yendalo evela eIndiya exhaphake kakhulu ...
Izicathulo zaseIndiya: Ukusuka ezenziwe ngezandla zabaYili abadumileyo
Ukuziva ulungile kwaye unemfashini kuyonwabisa olukhulu kubafazi abaninzi kwaye ngenxa yoko kufuneka uqaphele ...
Iziqholo zaseIndiya: Amakha eAncestral
Isiqholo besisetyenziswa ukususela kumaxesha akudala, ama-Egypt engowokuqala ukushiya umkhondo wobukho bawo….
I-henna: I-inki yendalo yaseIndiya yeetattoo kunye neenwele
Kulabo bafuna ukubonakala bekhangelekile kwaye banemfashini, umvambo awuthethi nje uphawu kulusu ...
IiCactact Cars zithatha ukungcamla okuthandwayo eIndiya
Iimoto ezihlanganisiweyo zibonelela ngolawulo olukhulu kunye nokhuseleko kumsebenzisi, zisetyenziswa ngabantu abangatshatanga kunye neentsapho ezincinci ...
Izityalo zonyango kunye neeHerbs zaseIndiya
Izityalo okanye amayeza ezonyango ngamayeza anokusetyenziswa ekunyangeni okanye ekunciphiseni iimpawu zezifo ezithile. I…
Iimpawu zeMovie zeMovie
Alithandabuzeki elokuba iifilimu zothando zezona zezorhwebo kakhulu kwihlabathi leemovie. Enkosi ku…
Ngokungathandabuzekiyo yenye yezona mfihlakalo zinkulu zibekwe emntwini, hayi ezangoku kodwa ezidlulileyo ...
Ukulila: Inkqubo yakudala yaseIndiya
Ngokubhekiselele kwi-aesthetics, enye yeendlela ezisetyenziswayo kakhulu ukukwazi ukususa iinwele kwiindawo ezahlukeneyo ...
Amantongomane: Icandelo leHindu gastronomy
Njengoko usazi kakuhle, amandongomane kukutya kwesondlo okubaluleke kakhulu kukutya kwabantu. Oko…
Yintoni amachibi angcwele eIndiya?
I-India lilizwe lesixhenxe ngobukhulu emhlabeni kwaye okwesibini linabantu abaninzi. Le colossus esempuma yaziwa ...
Namhlanje siza kuzntywilisela kwihlabathi le-cinema yaseIndiya, oko kukuthi i-Bollywood, ukudibana ...
Iilwimi kunye neziyelelane zaseIndiya
I-Indiya lilizwe elothusayo kwinani labemi elihlala kulo kunye nokwahluka ...
I-India lilizwe elahlukileyo kunye nolwimi lwayo, i-gastronomy, inkolo iyakungqina oko. Ukwahluka okunjalo kunxulumene namasiko abo ...
UHrithik Roshan kunye no-Shahrukh Khan: IiNkanyezi eziKhulu ze-Bollywood
Ngeli xesha siza kuthetha ngabona badlali baphambili eIndiya. Masiqale ngokukhankanya uHrithik Roshan o…
Iimvumi ezaziwayo zaseIndiya
Ngesi sihlandlo siza kuthetha ngezinye zezona zinto zibalaseleyo zomculo wamaHindu. Kwixesha elidlulileyo sidibene ...
Iindidi zeefilimu zecinema zaseIndiya
E-Indiya mihla le abantu abahamba imovie bayamangaliswa ngakumbi kuba ukwahluka kweefilimu kwenza umhlaba omkhulu ...
Uninzi abadlali abadumileyo Indian cinema
I-Bollywood, njengoko usazi kakuhle, yi-mecca ye-cinema yaseIndiya, kwaye namhlanje ayaziwa nje kuphela ...
Iintsomi zaseIndiya: Izigebenga kunye needemon
I-Indiya lilizwe elingaqhelekanga, eliyimfihlakalo nelineminyaka eliwaka kwaye njengayo nayiphi na indawo enembali eninzi ayibonisi ...
Intsomi yamathambo amakhulu eIndiya
Iindaba zabetha kwakamsinya nje ukuba ziqale ukusasazeka kwi-Intanethi: ukumbiwa kumantla eIndiya kungqina ubukho ...
Namhlanje siza kuthetha ngesihloko esibaluleke kakhulu ekufuneka sazi ngaphambi kokuya e-India, ...
I-India yenze umtsi omkhulu kakhulu kuqoqosho lwehlabathi njengoko inguqoqosho lwesine ...
UAishwarya Rai: Imodeli yamaHindu kunye noMlingisi
UAishwarya Rai yenye yeemodeli ezidumileyo kunye nabadlali eIndiya. Wazalelwa ngomhla we-1 ...
Amaxwebhu ayimfuneko ukuya eIndiya
Ukuba ucinga ngokuya eIndiya, ngaphambi kokukhetha ukuba yeyiphi indawo oza kuyindwendwela, ngaphambi kokubhukisha ihotele kunye ...
Izazinzulu ezivela eIndiya
Njengoko usazi kakuhle, i-India lilizwe elinemisebenzi engaqondakaliyo kunye nenkcubeko ebanzi. Njengoko besitshilo kwezinye ...
INimbu Pani: isiselo esiqhelekileyo eIndiya
Ijusi yeelamuni ezine okanye iilima, ilitha yamanzi, iswekile okanye ubusi, yavela amanzi kwaye ukuba ufuna ityuwa yenza isiphuzo esimnandi kunye nehlaziyayo selemoni esaziwa eIndiya njengeNimbu Pani.
Phakathi kweesimboli zaseIndiya, sigxininisa kwindawo yokuqala iflegi yayo, enemibala emi-3 ...
Umdlalo wabantwana oyingozi kunye nemfezi
Umabonwakude: Ngaba isisombululo esiGqithisileyo eIndiya?
Njengoko usazi kakuhle, i-India lelinye lawona mazwe aphakamisa uluhlu lwezona ndawo zinabantu abaninzi kwinqanaba ...
Isongo sothando saseIndiya
Kukho isithethe esihle nesomdabu saseIndiya sokunika isongo esibizwa ngokuba yi-rakhi esenziwe ngendlela yayo elula ngentambo ebomvu yomqhaphu kodwa ekuhambeni kwexesha siguqulwe ngokongeza ezinye iintlobo zezinto ezinje ngemisonto yegolide okanye amatye anqabileyo.
Iiyunivesithi ezigqwesileyo eIndiya
Ezinye zeeyunivesithi eziphambili kwilizwekazi laseAsia zifumaneka eIndiya. Ngokwamanqanaba e-Intanethi, ...
Umchamo wenkomo: Ngaba uluncedo kwimpilo?
Kuyaphambana ukucinga ukuba i-India yenze njengesiselo esiqhelekileyo sesiselo esithambileyo esisekwe kumchamo we ...
I-Bay yaseBengal, eyinxalenye yoLwandlekazi lwaseIndiya
IGulf okanye iBay yaseBengal imi kumantla ntshona oLwandlekazi lwaseIndiya. Lulwandle olulinganiselweyo ...
Ooritsho: Izothutho lwasekhaya laseIndiya
Ukuya eIndiya kuthetha umhlaba wonke weemvakalelo ezahlukeneyo kunye nemvakalelo. Ngeli xesha siza kuthetha ngezithuthi zabo zemveli, ...
Iintsomi kunye neentsomi zaseIndiya
Sihlala sithetha ngeentsomi namabali aseIndiya. Ukugqibela kwethu ukukhankanya iincwadi ezingcwele ...
Imibhalo engcwele yaseIndiya
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Indiya lilizwe lamabali, iintsomi namabali; Uninzi lwazo ...
IRanipet, isixeko esingcolisekileyo eIndiya
I-Indiya ibonakala njengelizwe lendalo, kodwa kukho izixeko ezingcoliswe ngokwenene. Enye yazo…
Mc Donalds eIndiya
Njengoko sisazi kakuhle, uMc Donalds kukutya okukhawulezayo kunye neebhamburger zayo ezidumileyo, iifriji kunye nokutya kokonwaba ...
IKamasutra kunye nencwadi edumileyo yamaHindu yothando (Icandelo 1)
Kwinkulungwane yamashumi amabini, ithiyori kaSigmund Freud yayijongene nokuchaza, kwihlabathi lezengqondo, ...
Iinkomo ezingcwele eIndiya
Xa ujongana nalo mbandela, into yokuqala ethi qatha engqondweni ligama elithi "inkomo engcwele", ethi ...
Itempile yeRat eIndiya
Ixesha elingaphezulu, iitempile ezininzi zenziwe ukukhumbula abantu abathile okanye izinto eziyintsomi, kodwa zihlala ...
Zinkulu kwaye bezikho ukusukela kumaxesha amandulo, ngaphambi kokuba baye emfazweni kunye namabutho, namhlanje ...
Kukho abantwana abatshatayo nangona bengazi ncam ukuba yintoni ekufuneka bejongane nayo kwixa elizayo, uxanduva, ...
Iiholide kunye nemibhiyozo eIndiya
I-India lelinye lala mazwe aqhele ukubhiyozela kakhulu. Kwaye kukuba imeko yokomoya yemithendeleko ...
UYesu waseNazarete nobudlelwane bakhe neIndiya
UYesu waseNazarete, ngokobuKristu, unyana kaThixo usenokuba wachitha ixesha eIndiya. Nerd…
Isiko lokutya ngezandla zakho eIndiya
E-India, ukutya ngezandla zakho kuqhelekile kwaye yiyo loo nto xa sisiya nakweyiphi ...
Ukudlala iqakamba eIndiya
Kukho imidlalo efuna isibindi esikhulu kunye noloyiko, eminye yamandla kunye nobuchule kunye nesakhono kunye ...
Impilo yendlela yaseIndiya
Ngokwesiko lase-India, zazikhona iindidi zamayeza emveli, ngokwesiko ngalinye ...
UBuddha kunye nelifa lakhe eIndiya
Kunyaka ophelileyo ukwakhiwa kwesakhiwo esibandakanya itempile kunye nomfanekiso oqingqiweyo waqala e-India ...
Imozulu yase-India: Leliphi elona xesha lilungileyo lokundwendwela i-India?
I-Indiya, ekumbindi weAsia, inandipha uluhlu olubanzi lwemozulu. Okona kwaziwayo ...
Iindawo ezingcwele zaseIndiya
E-Indiya, kukho isithethe sakudala sohambo lokuya kwiindawo ezisathathelwa ingqalelo namhlanje ...
Umculo wamaHindu: Uncuthu lwezithixo
Umculo wesintu waseIndiya, amaxesha amaninzi ukwaziwa njengomculo wamaHindu, le yeyona nkolo iphambili kwaye ...
Iiwayini zaseIndiya: Isiko lakudala lizalwa ngokutsha
Ngokufanelekileyo xa ucinga ngewayini, enye yeendawo zokugqibela ocinga ngazo yi-India. Nangona kunjalo,…
I-curry yenkukhu, isitya sendabuko saseNdiya
Sesiphi isitya sesinye sezona zimeleyo eIndiya? Ukuba sidibanisa i-curry kunye nenkukhu, sifumana inkukhu ...
I-Indiya kunye negurus
Ukoyiswa kwesilumko samaIndiya, babizwa ngokuba "ngamagqwirha amancinci" agcwele yonke indawo, anika umbono wobuxoki ...
Indawo entle yeIndiya yendalo
Enye yezona zinto zibalulekileyo e-India ziindawo ezintle zomhlaba, apho utyani olushinyeneyo lugcwele khona, izilwanyana ezininzi ...
Iindawo zakudala eIndiya: adichanallur kunye noAgam Kuan
I-India lilizwe elinembali eninzi, ngommandla walo sinokubona izikhumbuzo ezahlukeneyo, kodwa kunye noluhlu ...